प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी साथ दिन तयार छौँ, अब त अहंकारको धरहराबाट ओर्लनुस् - गगन थापा Canada Nepal
प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी साथ दिन तयार छौँ, अब त अहंकारको धरहराबाट ओर्लनुस् - गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कोरोना महामारीमा सरकार एक्लैले सामना गर्न नसक्ने बताएका छन् । शनिवार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता थापाले सो कुरा बताएका हुन् । उनले अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नपर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
उनले भने - "प्रधानमन्त्रीज्यू यो लडाइमा 'हामी सक्दैनौँ' भनेर मन्त्रालयले हात उठाउने अनि तपाईँको प्राथमिकतामा अझै पनि महामारी नपर्ने ! आपत्तिजनक छ !"
उपाय जानेकाहरुको कुरा सुन्न र आवश्यक निर्णय लिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताउदै उनले आफुहरु साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले अन्तिममा अब अहंकार र अकर्मण्यताको धरहराबाट ओर्लन भनेका छन् ।
उनले भनेका छन् - कोरोना संक्रमणको जुन भयावह अवस्थामा हामी छौँ,निश्चय नै सरकार एक्लैले यसको सामना गर्न सक्दैन।सबै पक्ष र आम नागरिक सचेत,सतर्क र जिम्मेवार बन्नैपर्छ।तर प्रधानमन्त्रीज्यू यो लडाइमा 'हामी सक्दैनौँ भनेर मन्त्रालयले हात उठाउने अनि तपाईँको प्राथमिकतामा अझै पनि महामारी नपर्ने! आपत्तिजनक छ !
कठिन छ,तर अझै हामीसंग उपलब्ध स्रोत,साधन,जनशक्तिको सदुपयोग गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने ठाउँ छ।त्यसका लागि उपाय जानेकाहरुको कुरा सुन्न र आवश्यक निर्णय लिन सरकार तयार हुनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीज्यू,हामी साथ दिन तयार छौँ,कृपया अब त अहंकार र अकर्मण्यताको धरहराबाट ओर्लनुस।
बैशाख १८, २०७८ शनिवार १०:१२:३९ बजे : प्रकाशित